Izindaba > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ngabe ukufakelwa kwamazinyo kungenzeka ngohlobo 2 sikashukela
Amazinyo okufakelwa emzimbeni wesifo sikashukela .. Ukuphazamiseka okwenzeka emzimbeni onesifo sikashukela kusithinta kabi isimo samazinyo futhi kufaka izifo ezahlukahlukene. ...
Kusho ukuthini ukuphuza utshwala ngokulingana?
Ososayensi bakubonile ukuthi ukuphuza utshwala ngokulingana kunciphisa ubungozi besifo sikashukela. Ngokusho kwabaphenyi, ukuze uzisindise kwisifo esikhohlisayo kufanele uphuze ngokulinganisela, kepha kaningi ngo-28.07. ...
Uhlobo 2 Sifo Sikashukela Singahle Siyeke Ukuqubuka Kwesifo SikaParkinson
Umuthi wesifo sikashukela ungaba usizo kubantu abanesifo sikaParkinson Ngonyaka owedlule, iqembu elivela eNyuvesi yaseNetherlands lathola ngomuthi osetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. ...
I-Zinc yesifo sikashukela
Indima ye-zinc ekwakheni uhlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela iye yaqinisekiswa. Ososayensi baveze ubudlelwano phakathi koshintsho ekuqoqweni kwezinto ezilandelwayo, ikakhulukazi i-zinc, kanye nokuvela kwe-prediabetes - isimo esandulele lesi sifo. ...